Umthandazo waBantwana. ? Igazi likaKristu noMoya oyiNgcwele
Ukuthandazela abantwana. Isizathu solona lonwabo luqatha nolusizi olunokubakho nabani na onokuziva. Yiyo loo nto ukuphakamisa a ukuthandazela abantwana kwiGazi likaKristu noMoya oyiNgcwele yinto eqhelekileyo.
Ukusukela mhla sazi ukuba zikho, iintliziyo zethu zizele ziinkxalabo kunye neemvakalelo ezisoloko kunzima ukuzichaza.
Ukuhambisa zonke ezi zinto zixhalabisayo emthandazweni kuyeyona nto ilungileyo sinokuyenza njengabazali xa sibonisa ukuba sikhathazekile okanye sikhathazeke kakhulu.
Okwangoku, xa iingozi zibonakala zilungelelanisa usuku nalapho abantwana, ngakumbi kwinqanaba lolutsha, kubonakala ngathi abazifumani zonke izinto ezingalunganga ezikhoyo kwindalo.
Yiyo loo nto, kude kunqande le okanye le, into ekufuneka uyenzile, ngaphandle kwemfundo elungileyo, ukuthatha indawo yethu ecaleni komthandazo.
1 Umthandazo wabantwana Ngaba umthandazo unamandla amakhulu?
1.1 Umthandazo kwiGazi likaKristu wabantwana
1.2 Umthandazo kuMoya oyiNgcwele wabantwana
1.3 Umthandazo wabantwana abanemvukelo
1.4 Umthandazo kwiingelosi ezinkulu zabantwana
Umthandazo wabantwana Ngaba umthandazo unamandla amakhulu?
Uninzi lwabafundi bethu abazi ukuba imithandazo inamandla.
Baziwa njengamandla, kwanamandla amakhulu.
Imithandazo yethu Zizoqobo.
Bayarhoxa kwi Bhayibhile, indawo zeCawe yamaKatolika kunye nemithombo yokuthenjwa.
Zonke zomelele kwaye ziyasebenza.
Ke ngoko, ukuba ufuna umthandazo onamandla wabantwana, uyazi ukuba une-3 ngezantsi. Thandaza ngokholo olukhulu. Ukuhlala ukholelwa kumandla kaThixo. Yiyo loo nto akufuneki isilele.
Umthandazo kwiGazi likaKristu wabantwana
Nkosi, Bawo uSomandla, siyabulela ngokusinika aba bantwana.
Kuluvuyo kuthi, kwaye amaxhala, uloyiko kunye nokudinwa okusixabisileyo, siyabamkela ngokuzola. Sincede sibathande ngokunyaniseka.
Ngathi usizisele ubomi; Ukususela kulo lonke iphakade ubazile kwaye ubathanda.
Siphe ubulumko ukubakhokela kunyamezelo ukuze ubafundise ukuba baphaphe ukuze baqhele kumzekelo wethu.
Uyaluqinisa uthando lwethu ukuze ubalungise kwaye ubenze bhetele.
Kunzima ngamanye amaxesha ukuziqonda ukuba zinjengokuba zifuna kuthi, ukubanceda benze indlela yabo.
Sifundise uYihlo olungileyo ngemfanelo zikaYesu unyana wakho kunye neNkosi yethu.
Ngaba uwuthandile umthandazo kwiGazi likaKristu wabantwana?
Ukuthi iGazi likaKristu lisageleza emnqamlezweni liyinyaniso abaninzi abathandabuza ukuyithandabuza.
Nangona kunjalo, eli gazi lihlala lihleli ngommangaliso ngendlela enkulu kwaye hayi Kuyinto esebenzayo kuphela ekucoceni izono zethu Inokusinceda nokusombulula nayiphi na imeko ephakamayo nangakumbi ukuba yeyenzelwe abantwana bethu.
Njengonyana olungileyo, uyazi kwaye uyayiqonda yonke into abanokuhamba kuyo abantwana, ngalo lonke ixesha banokuhendwa ukuba benze izinto ezingabalungelanga bona kwaye abazi okanye bangafuni ukuzibona.
Kungenxa yako konke oku ukucela ukuba igazi laso nasiphi na isicelo esikhethekileyo sabantwana sinamandla, ukongeza ukusinika uxolo oluyimfuneko lokulinda ummangaliso, sinokuqiniseka ukuba kuya kusinceda kwaye kungekudala kunokuba sibone oko sikucelayo.
Umthandazo kuMoya oyiNgcwele wabantwana
Nkosi khanyisela iingqondo zabantwana bethu ukuze bayazi indlela oyifunayo kubo, ukuze banike uzuko kwaye bafikelele elusindisweni.
Babambe ngamandla akho, ukuze bakhuthaze ebomini bakho iinjongo zobukumkani bakho.
Sikhanyisele nathi, bazali, ukuba sibancede babone umsebenzi wabo wobuKristu kwaye bawuphumeze ngesisa, basebenzisane kunye nenkuthazo yakho yangaphakathi.
Xa uYesu wenyukela ezulwini wasishiya kuMoya oyiNgcwele ukuba ube yinkampani yethu engapheliyo yonke imihla de abuye.
Akukho mntu usazi ngaphezu kwakhe, hayi kwathina.
Xa sasinexhala, saziveza, xa sasilila ngenxa yonyana, uMoya oyiNgcwele wayekhona ukusigcina sinenkampani kwaye wayejongana nonyana apho kungekho apho akhoyo.
Masimbuze ngokholo nangokuqiniseka ukuba uya kusinceda kwaye enze yonke into athathe indlela afanele ukuba nayo, kungekudala kunokuba silindele.
Thixo wam, ndikunika abantwana bam; Ubanike mna, yeyakho ngonaphakade; Ndiyabafundisa Wena kwaye ndicela ukuba ubagcinele uzuko lwakho. Nkosi, ngamana ikratshi, ulangazelelo, ububi bungaphambuki kwindlela elungileyo.
Ukuba banamandla okwenza ngokuchasene nobubi nokuba intsusa yazo zonke izinto abazenzayo zihlala kwaye zilungile.
Kukho ububi obuninzi kweli lizwe, Nkosi!
Uyazi indlela esibuthathaka ngayo kunye nendlela ububi obusithanda ngayo ngokufuthi; kodwa Unathi kwaye ndibeka abantwana bam phantsi kokhuseleko lwakho.
Banike ukukhanya, amandla kunye novuyo kulo mhlaba, Nkosi, ukuze baphilele Wena emhlabeni; kwaye ezulwini, sonke kunye, singayonwabela inkampani yakho ngonaphakade.
Imvukelo ebantwaneni yinto esinokuthi siqale ukuyiphawula kwasebuntwaneni kwaye ngelo xesha apho kuya kufuneka uqale khona cela uncedo oluthunyelwe ezulwini.
Amaxesha amaninzi thina njengabazali sifuna idilesi ukuze sazi ukuba senze ntoni kwaye singenzi ntoni ukunceda imvukelo yabantwana bethu ayisiyonto imbi kangako.
Myalelo kwi umthandazo wabantwana abanemvukelo, Ukusuka emphefumlweni ukuze sinikwe ubulumko kunye neengcebiso ezilungileyo kubantwana bethu zezona zinto zinokwenzeka.
Umthandazo kwiingelosi ezinkulu zabantwana
Bawo othandekayo kunye neNkosi yethu, wusikelele lo mthandazo ngothando lwakho infinito ukuze xa ishiya imilebe yam nge amandla Ayinakuchazeka yintliziyo yam, yonke imikhosi yakho yasezulwini iyayiphendula ifowuni yam ngokunika abantwana bam nantoni na abayifunayo kuguquko kunye nolonwabo lwabo.
Wugubungele lo mthandazo unyaniseka noBukho bakho kwaye ungavumeli ububi okanye iimpazamo zam ziwuchithe. Ingelosi enkulu, uMichael, ndikubiza ngegama leNkosi, ukuba uthathe abantwana bam ubakhusele ngekrele lakho kubo bonke ububi.
Sika ukuphazamiseka kunye nokubopha kwabo, ubakhulule kwaye ubanike ukholo oluqinileyo ukuze bangaphumi kwindlela elungileyo. Ingelosi enkulu ethandekayo uJofiel ndikubiza ngegama leNkosi ukuba usongele abantwana bam ngokukhanya kobulumko.
Bancede ukuba baphuhlise ngempumelelo iitalente kunye nobuchule babo, babeke ecaleni kwempazamo, ububi kunye nokungazi. Bakhuthaze ukuba bafundise kwaye basoloko behlula kwaye bacoce iindlela zabo ukuze baphumeze umsebenzi wabo kwaye bonwabe emhlabeni.
Ntanda Ingelosi enkulu uChamuel Ndikubize ngegama leNkosi ukuba ugcwalise abantwana bam ngoThando, uphilise iintliziyo zabo kwaye ubavumele ukuba balwazi uthando lwenene kwaye balugcine.
Bancede ukuba baphile ngokuvisisana nayo yonke into el mundo kwaye ubanike amandla okuba nobubele kunye nothando ngaphandle kokubuthathaka okanye ukuphenjelelwa bububi.
Ngamana ukuKhanya okukhanya kwimiphefumlo yabo kungaze kuphume. Ke mayibe yintsikelelo yosapho lwethu kunye nozuko lukaThixo ngonaphakade kanaphakade.
Kuyatshiwo ukuba wonke umntu emhlabeni unengelosi ayabelweyo, kodwa akutshiwo nto ngeengelosi ezinkulu nokuba bakwelinye inqanaba lobukhosi ngaphakathi komkhosi wezulu.
Singazisebenzisa ngalo naliphi na ixesha lesidingo.
Iimbaleki, iimfazwe kunye nabahlobo bethu, iiArchangels zihlala zizimisele ukusinceda ukuba silwe amadabi esingenawo mandla.
Kwimeko yabantwana akukho nto ilunge ngakumbi kunenye yokuba alwe uloyiso nakweyiphi na indawo efunwa ngumntwana.
Unokuthetha izivakalisi ezi-4 ngaphandle kweengxaki.
Ukuthandazela abantwana kwiGazi likaKristu, kuMoya oyiNgcwele nakwabo baNgcwele basebenza kuphela ukukhusela ukwahlula abantwana kwiindlela ezimbi.
Ke ngoko, awoyiki ukuthetha zonke izivakalisi ezikweli nqaku.
Into ebalulekileyo kukukholelwa kumandla kaThixo kwaye ube nokholo.
Thandaza ngaphandle koloyiko, uya kubaleka kakuhle.